Ifanitshala yokusonga ukuhombisa iibhalkhoni ezincinci kakhulu | Bezzia
Ifenitshala yokusonga ukuhlobisa iibhalkhoni ezincinci kakhulu
UMaria vazquez | 07/01/2022 18:00 | Ukuhombisa amaqhinga
Ngexesha lokuvalelwa, abo bethu babenokonwabela indawo yangaphandle ekhayeni lethu babeziva benethamsanqa. Nditsho i iibhalkhoni ezincinci kakhulu baba bubutyebi obuncinane. Kwaye kunjalo na ifenitshala yokusonga Ezi zinokuba yinto yokwandiswa kwendlu.
Iibhalkhoni zezindlu Ngokuqhelekileyo bancinci kodwa oko akusosithintelo sokuzisebenzisa. Ngaba unokuzithelekelela kule nto uphunga ikofu kusasa ngexesha lasehlotyeni? Uhleli ngokuhlwa ufunda? Ukonwabela isidlo sangokuhlwa neqabane lakho? Unokwenza ukuba kwenzeke ngokubeka iifenitshala ezimbalwa.
1 Ifenitshala yokusonga
2 Ifanitshala ebalulekileyo
3 Zidibanise ne ...
Ifenitshala yokusonga yeyona ndlela ilungileyo yokuhombisa iibhalkhoni ezincinci kakhulu. Ezi azikho kuphela, ngokuqhelekileyo, zilula, kodwa zikwavumela nathi qwalasela kwakhona indawo ngokulula xa kuyimfuneko. Ukusongwa kuthatha indawo encinci kakhulu, eya kukuvumela ukuba usebenzise isithuba ngenye indlela. Kodwa ezi ayizizo kuphela iingenelo zolu hlobo lwefenitshala njengoko unokufumanisa ngezantsi.
Ziifanitshala elula; zinobunzima obuncinci kwaye ngokubonakalayo zithatha indawo encinci.
Inokusongwa kwaye iqokelelwe lula xa kufuneka sisebenzise indawo ngenye indlela okanye silungiselele nje ubusika.
Yeyiphi ifenitshala esongelayo ebalulekileyo kwibalcony? Iimfuno zomntu ngamnye okanye usapho ngalunye lwahlukile, kodwa kukho iifenitshala ezimbini ezingafane zingene kwindlela yebalcony njengoko ziyenza ibe yindawo esebenza ngakumbi. Sithetha ngokuqinisekileyo malunga iitafile nezitulo.
Omnye itafile esongwayo engqukuva lulongezo olusoloko lwamkelekile. Kwaye… ingaba ithini ingqiqo ukubeka itafile engenazitulo ezibini ubuncinci ukuyijikeleza? Iseti yolu hlobo iya kukuvumela ukuba wenze imisebenzi emininzi kumazwe angaphandle: yiba nekofu, utye, ufunde, usebenze ... kwaye wenze kunye nomnye umntu.
Ingaba unendawo encinci kakhulu? Ukubheja a itheyibhile esemicircular ukuba unokuncamathela kwi-railing okanye eludongeni kwaye ubeke indawo yezihlalo ngebhentshi kwicala le-balcony. Mhlawumbi awunokulingana izitulo ezibini kodwa ibhentshi enokuhlalisa abantu ababini. Ungabeka itafile yoxande? Ukuba indawo ye-balcony yakho iyakuvumela kwaye ukwazi ukutya kunye nokutya ngaphandle yinto ephambili kuwe, ungathandabuzi!
Ukubheja etafileni kunye nezitulo ezenziwe ngezinto ezifanelekileyo kwiindawo zangaphandle. Izinto ezixhasa kakuhle Imozulu embi njengentsimbi, iintsinga ezenziweyo okanye iinkuni ezitshisayo ezifana ne-teak.
Zidibanise ne ...
Un workbench okanye ukhululwe kunye yokugcina azikho kakhulu kwibalcony. Ezituloni unokuhlalisa abantu abangakumbi kunokuba unokubahlalisa kwizitulo ezihlala kwindawo enye nesi. Ukuba uncamathisela eludongeni kwaye ubeke ezinye iimathi ungaphumla nangaliphi na ixesha lemini.
Ngaba eyona nto iphambili kuwe kukuba ube nendawo yokungqengqa nokuphumla? Ke mhlawumbi ukhetha ukubeka isofa kwaye ulibale ngetafile kunye nezitulo ukuba awunayo indawo ye-tofo. Yiya kwisofa yekona kwaye ugcwalise isethi nge itafile yekofu esongwayo. Kuya kukunceda ukuba ube nekofu okanye usebenze isidlo esilula se-snack.
Ngaba ufuna ukwenza indawo yamkeleke ngakumbi? Ukuba awuwuthandi umgangatho webalcony yakho okanye ukwimeko embi, kutheni ungafaki a iqonga elinepateni? Zilula kakhulu ukuzibeka; unqakrazo olulula nje ezimbalwa. Kwaye ukuba i-balcony yakho incinci kakhulu, iindleko aziyi kunyuka. Baxabisa phakathi kwe-16 kunye ne-€ 23 ngemitha yesikwere. Kwakhona i-textiles iya kukunceda ngokufudumala.
Kwaye ungalibali bandakanya ezinye izityalo. Ezi zizisa ukutsha kunye nombala kwibalcony. Kwaye, kuxhomekeke ekubeni zeziphi izityalo ozikhethayo kunye nalapho uzibeka khona, zinokukunika nokuba ngasese okukhulu. Bheja kwisampulu zogcino oluphantsi ezinokuhlala ngaphandle unyaka wonke nezingenasayizi mkhulu ukuze zingebi ndawo kakhulu.
Ukuhlobisa iibhalkhoni ezincinci kunye nefenitshala yokugoqa ilula kakhulu kwaye ayibizi. Jonga ezinye kwaye ulungiselele i-balcony yakho ngaphambi kokuba intwasahlobo ifike ukuze uqale ukuthatha ithuba layo ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa amaqhinga » Ifenitshala yokusonga ukuhlobisa iibhalkhoni ezincinci kakhulu
Kufuneka kukhuliswe ntoni umntwana ongevayo
4 amayeza endalo ukunyanga intloko ebuhlungu